ओलम्पिक्स इतिहासका १० अविस्मरणीय क्षणहरु – Talking Sports
बिश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक्सभन्दा बढी प्रेरणादायी अरु के होला र ? यो एउटा यस्तो प्रतियोगिता हो जहां खेलाडीहरु प्राकृतिक रुपमा भन्दा माथि उठेर प्रदर्शन दिने गर्छन् । तर कहिले काही ओलम्पिक्सका सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षणहरु किर्तीमानी उपलब्धी नभएर यस्ता पलहरुबाट आउने गर्छन् जसले हाम्रो आत्मालाई नै छुने गर्दन् ।
ग्रिष्मकालीन ओलम्पिकका यसअघि १० अविस्मरणीय क्षणहरु कस्ता छन् त ?
जेस्सी ओवेन्सको हिटरलाई जवाफ
जर्मनीको शासक नाजी पार्टीले आर्यन नसल भन्दा अरु कुनै राम्रो हुनै सक्दैन भनेर आफ्नो बिश्वासलाई प्रोपोगाण्डाको रुपमा संसराभर फैलाउने प्रयास गर्दै थियो । १९३६ को बर्लिन ओलम्पिक्स बिश्वसामु साबित गर्ने औजारको रुपमा हिटलरले लिएका थिए ।
तर अफ्रिकन अमेरिकन एथ्लिट जेस्सी ओवेन्सको भने अर्कै बिचार थियो । अश्वेत ओवेन्सले हिटलरको आखा अगाडी १ सय मिटर, २ सय मिटर, ४ बाई १ सय मिटर रिले र लंग जम्पसहित चार स्वर्ण जितेर देखाइदिए ।
नांगो खुट्टा अबेबे बिकिलाले रचेको इतिहास
इथियोपियाका म्याराथन धावक अबेबे बिकिलाले उपयुक्त जुत्ता नपाएपछि उनी १९६० को रोम ओलम्पिक्समा खाली खुट्टा नै कुदे । खाली खुट्टटा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछाडी छोड्दै उनी ओलम्पिक्स स्वर्ण जित्ने पहिलो अफ्रिकी बने ।
बेबी हिरोसिमाले बालेको ओलम्पिक कल्ड्रन (घडा)
१९६४ को टोकियो ओलम्पिक्स इतिहासकै सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण दिनेखेलकुदको महाकुम्भ बन्यो । एसियामा पहिलो पटक ओलम्पिक्सको आयोजना हुंदै गर्दा जापान दोश्रो बिश्वयुद्ध को बिध्वंशपछि जुर्मुराउने प्रयास गरिरहेको थियो ।
हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले परमाणु बमको बिध्वंशलाई आफूले पछाडी छोडिसकेकोबिश्वसामु साबित गर्ने मौका जापानालाई थियो ।
स्टेडियममा ओलम्पिकको टर्च बाल्न जापानले सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार छान्यो । जापानी खेलाडी साकाई योसिमोरीले टर्च बाले । बेबी हिरोसिमा नामले चर्चित योसिमोरी अगष्ट ६, १९४५ मा जन्मिएका थिए । यही दिन अमेरिकाले हिरोसिमामा बम खसालेको थियो ।
ब्ल्याक पावर सल्युट
१९६८ कोमेक्सिको ओलम्पिक्सको यो क्षण बिश्वसामु सबैभन्दा बढी चर्चित बन्यो र अझै पनि छ । सामाजिक सञ्जालको जमाना भएको भए यो अहिले संसारकै सबैभन्दा भाइरल तस्विर बन्न सक्थ्यो ।
२ सय मिटर दौडमा अफ्रिकी अमेरिकन टोमी स्मिथ र जोन कार्लोसले क्रमशः स्वर्ण र कास्य पदक जितेका थिए । पदक समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रिय गान बजेपछि दुवै धावकले टाउको निहुराउदै मुठ्ठी आकाश तर्फ राख्दैअमेरिकामा भएको रंगभेदको बिरोध गरेका थिए ।
बुवासंग फिनिस लाइन क्रस गरेका डेरेक रेडमन्ड
चोटले संघर्ष गरेपनि ब्रिटिस धावक डेरेक रेडमन्ड हार खानेमध्ये थिएनन् । चोटका कारण लगातार अवसरहरु गुमाएपछि रेडमन्ड १९९२ को बार्सिलोना ओलम्पिक्सको लागि तैयार भएका थिए ।
स्वर्ण दाबेदार रहेका रेडमन्डले ४ सय मिटर सेमिफाइनलका दौरान ह्यामस्ट्रिंगको चोट बोके । हार नखादै उनी उठे र फिनिसिंग लाइनतर्फ लागे । उनका बुवा जिम सुरक्षा कर्मचारीसंगै आए र ट्रयाकमा प्रवेश गर्दै रेडमन्डलाई फिनिसिंग लाइनसम्म डोर्याए ।
डेरार्तु तुलुर एलाना मेयेरले अफ्रिकामा ल्याएको एकता
१९९२ को ओलम्पिक्समा इथियोपियाकी डेरार्तु तुलुले १० हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितिन् । उनी ओलम्पिक्समा स्वर्ण जित्ने पहिलो अश्वेत अफ्रिकी महिला पनि बनिन् । तर उनको स्वर्ण भन्दा पनि दक्षिण अफ्रिकी धाविका एलाना मेयरसंग ट्रयाकमा लिएको भिक्टरी ल्यापले ठूलो अर्थ राख्यो ।
अपार्थेडका कारण दक्षिण अफ्रिका र उसका खेलाडीहरु निलम्बनमा परेको कारण अझै पनि सिंगो अफ्रिकासंग एकताको सुत्रमा बाधिन संघर्ष गरिरहेका थिए । तुलुर मेयेरको संयुक्त भिक्टरी ल्यापले एक दिनकै लागि भएपनि अफ्रिकी महादेशलाई एक बनाउन मद्दत गरेको थियो ।
चोट भुलाउदै स्ट्रगले अमेरिकाका लागि जितेको स्वर्ण
अमेरिकाले जिम्न्यास्टिक्समा टिम स्वर्ण जितेको थिएन । एटलान्टामा ओलम्पिक्स आयोजना गर्दा उसले इतिहास बदल्न चाहन्थ्यो । केरी स्ट्रगको मात्र दुई भल्ट बाकी रहेको स्थितिमा अमेरिका स्वर्णबाट निकै नजिक थियो । अग्रता निकै सानो रहेका कारण उनको प्रदर्शनले ठूलै मतलब राख्ने थियो ।
पहिलो प्रयासमा स्ट्रगको ल्याण्डिंग राम्रो भएन र उनले गोलीगांठोमा चोट बोकिन् । चोटले दुख दिएपनि उनले अविश्वसनीय प्रदर्शन गरिन् । दोश्रो भल्टमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन दिदै अमेरिकाको टिम स्वर्ण पक्का गरिन् ।
मुहम्मद अलीले बालेको कल्ड्रन
एक रेष्टुरेन्टले अश्वेत भएकै कारण खाना दिन नमानेपछि महान अमेरिकी बक्सर मुहम्मद अलिले रिसको झोकमा आफूले ओलम्पिक्समा जितेको स्वर्ण ओहायो नदीमा फालिदिएका थिए ।
तर १९९६ को एटलान्टा ओलम्पिक्सको उद्घाटन समारेहमा अलीलाई नयां स्वर्ण पदक दिइएको थियो । अलिले ओलम्पिकको टर्च पनि बाल्ने मौका पाएका थिए । पार्किन्सन रोगबाट ग्रस्त अलिले कामिरहेको हांत थाम्दै ओलम्पिक टर्च बालेको भिडियो अहिले पनि निकै चर्चित छ ।
एकै झण्डा मुनि उत्तर र दक्षिण कोरिया
खराब सम्बन्ध रहदै आएको उत्तर र दक्षिण कोरिया २००० को सिड्नी ओलम्पिक्समा एकै झण्डा मुनि उद्घाटन समारोहको परेडमा देखिए । उत्तर कोरियाका जांग जु पाक र दक्षिण कोरियाका युन सुन चुंग कोरियन महाद्विप दर्शाउने झण्डा लिदै परेड गरेका थिए ।
यो संकेतले दुई देशबीचको तिक्तता समाप्त हुने आशा गरिएको थियो । यो सफल नभएपनि दुई कोरियाको प्रयासलाई निकै सराहना गरिएको थियो ।
लिउ जियांगको चोटले दुखी चिन
१ सय १० मिटर हर्डल च्याम्पियन लिय जियांग नेशनर आइकन र २००८ को बेइजिंग ओलम्पिक्समा स्वर्ण जित्ने दाबेदार थिए । तर कुनै कथाहरुको अन्त्य निकै दर्दनाक हुने गर्छ ।
पहिलो चरणको पहिलो हर्डल पनि नपुग्दै चोटका कारण २००४ ओलम्पिक्सका स्वर्ण बिजेता लिउले चोटका कारण दौड त्यागे । उनको प्रदर्शन हेर्न खचाखच भरिएको बर्ड नेस्ट स्टेडियम लिउ खुट्टा खोच्याउदै बाहिरिदा शोकमा डुबेको थियो ।